Ny iPhone 6s vaovao dia misy microphone 2 eo ambany | Vaovao IPhone
Juan Colilla | | iPhone, iPhone 6s, About us
Niaiky aho, rehefa nividy ny iPhone 6 tamin'ny taon-dasa dia efa fantatro izany ary mbola mazava ny fikasako, dia ho iray amin'ireo olona mividy iPhone 6 vaovao aho, ary milaza an'io aho satria androany amin'ny «fitsangantsanganana mahagaga ataoko. »Manodidina ilay tranonkala iPhone vaovao dia manasongadina tranonkala (Fantatrao, rehefa mandeha mividy iPhone vaovao ianao ary mbola manana iray volana sisa mandra-pahatonganao azy, io fiandrasana tsy misy farany io dia misy dikany raha mandinika ianao indraindray hoe inona no miandry anao rehefa mividy azy ianao, ary amin'ny alàlan'ny fomba tazomy ilay hype).
Eny, amin'ny iray amin'ireo diako dia nanapa-kevitra ny hampitahako ny olan'ny habeny (refin'ny telefaona) hanamarinana izany marina tokoa ny fitomboana voavidim-bola amin'ireo refy ireo izay hamela ny raharaha Aquatik (tranga any anaty rano any Lunatik) tsy misy ilako azy, sendra zavatra tsy nampoizina aho, ny iPhone 6s dia nanana fandaminana hafa tany ambany noho ny iPhone 6.
Vetivety dia nanokatra tranokala roa aho hampitahako ara-maso ny kisarisarin'ireo fitaovana roa ireo, ary ny nahagaga ahy dia marina aho, ny iPhone 6s vaovao dia eo amin'ny farany ambany mikrô faharoa, antsipiriany izay tsy voamariky nandritra ny fehezanteny fototra, na araka ny eritreritray.
1 Ny mikrô faharoa
2 Inona no dikan'izany?
3 HD antso
4 Hey Siri, noho ny aminao ve izany?
5 Ny fanafoanana feo
Ny mikrô faharoa
Ireto misy sarin'ny faran'ny iPhone 6 sy 6s:
Maro aminareo no hanontany, inona no mahasamihafa izany? Inona no tombony atolotry ny iPhone 6? Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo dia holazaiko fa misy zavatra maro tokony ho raisina, tokony ho fantatsika aloha raha te hampiasa microphone roa i Apple mba hisamborana ny feontsika amin'ny fomba mazava kokoa, raha mikasa ny hampiasa ny iray ho an'ny fampiasana ara-dalàna ary ny iray hafa hanafoanana ny tabataba na raha amin'ny tranga fahatelo sy azo atao dia napetraka manokana ho an'ny fiasa "Hey Siri" miasa foana ary izy no miandraikitra ilay coprocessor M9 vaovao.
Inona no fantatsika? I Apple dia nanonona zavatra 3; Miantso HD, "Hey Siri" dia miasa foana ary farany eo amin'ny tranokalany ao amin'ilay fizarana "fandraisam-peo" dia voasoratra hoe "fanatsarana ny tabataba nohatsaraina".
Ny antso HD nambara dia fanatsarana fa tsy chip anatiny, noho ny chip vaovao natokana ho azy ireo antso amin'ny alàlan'ny LTE na Wi-Fi mamela ny famindrana angona misy fantsom-pifandraisana avo kokoa sy hafainganam-pandeha avo kokoa, izay avy eo lasa adika ho audio avo lenta kokoa.
Na izany aza tsy midika izany fa tsy afaka manampy i Apple mikrô faharoa hahazoana antoka fa voasambotra mazava sy tsy misy fahatapahana ny teninay.
Hey Siri, noho ny aminao ve izany?
Ny iPhone 6s vaovao dia misy M9 coprocessor Tafiditra ao amin'ny chip A9 izay hitantana tsara kokoa ny sensor raha tsy mila manaitra ny bibidia (CPU) sy ny herin'ny fako, ity mikrôfa ity dia azo fehezin'ny coprocessor M9 hitantanana ny asan'ny Hey Siri izay amin'ity maodely vaovao ity dia mavitrika hatrany.
Ny fanafoanana feo
Ity mikrô vaovao ity dia azo natokana manokana ihany ho an'ny Fanafoanana ny tabataba, zavatra iray izay efa niasa mialoha ny iPhone 6 na dia mendrika aza izy, tamin'ity indray mitoraka ity dia hitantsika ny fomba nanampian'i Apple mikrô fahatelo mba hahazoana ny haavon'ny tabataba sy hanafoanana azy ireo.
Na eo aza izany ary inona no azontsika atao amin'ny Internet, heveriko fa tadidiko fa rehefa nilaza i Apple «fihenan'ny tabataba»Ao amin'ny fehezanteny fototra dia ny fakantsary sy ny mpikirakira sary vaovao no tiany horesahina, izay hampihena ny tabataba amin'ny sary hampahazava kokoa azy ireo, amin'ny antsipiriany ary ho kanto kokoa.
Na izany aza, io safidy farany io dia tsy tokony heverina ho voahilika, azo atao foana fa ny tanjon'ity mikrô fahatelo ity dia ny hahafahana manala ny tabataba manelingelina na amin'ny antso na amin'ny fakana horonantsary.
Paraphrasing Socrates, fantatro fotsiny fa tsy mahalala na inona na inona aho, ny hany zavatra fantatsika amin'izao dia ny eo ambanin'ny iPhone 6s vaovao (sy 6s Plus) misy mikrô fanampiny fa ny faran'ny farany lasa nisy ny iPhone 6 sy 6 Plus dia tsy afaka miandry an'i Apple hanonona azy fotsiny aho (misalasala aho) na rehefa amidy dia hisy hamaky ity enigma ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6s » Ny iPhone 6s vaovao dia misy microphone 2 eo ambany
Ary manaisotra lavaka ao amin'ilay mpandahateny izy ireo, antenaiko fa nohatsarain'izy ireo izany, satria raha tsy manam-pahaizana amin'ny vatomamy i Apple.
Salama, altergeek. Aza miraharaha izany loatra. Ny iPhone 6 Plus amin'ny sary dia misy lavaka 6 ary ny ahy manana 8. Mety hiaraka akaiky izy ireo ary ny iray tsy handray ny toeran'ilay iray hafa.
Efa napetrak'i Daniel ho Paul, ny 6 manana 6, dia holazainao amiko avy eo; 0
Io ihany no holazaiko; Etsy andaniny!, nanisa ny lavaka tao amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus fotsiny aho, ary… ny 6 manana 6 ary ny 6Plus 8.
Salama hariva, manahoana ny fahatsapana ny mic?, Noraketiko teo akaikin'ny jukebox iray aho, manahy sao ho simba ny iray amin'ireo microphone dls. Segondra vitsy monja.
Manapaka ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ao amin'ny White House i Siri